MAHAFINARAHANA Bell 222A FSX & P3D
Ny Bell 222A dia vokatry ny efa ho telo taona niasana mafy sy fanoloran-tena. Tsy naharitra ela ny tetikasa ary na dia fomba iray nanamaivana ny alahelo nandritra ny fahafatesan'ny fianakaviany sy ny naman'ny ekipa ERS aza. Ny Eagle Rotorcraft Simulations dia mirehareha amin'ny farany afaka mitondra ny 222A ho any amin'ny mpanatrika. Na dia misy fanatsarana hafa mbola ho avy aza, ny famotsorana amin'izao fotoana izao dia afaka manidina sy azo ampiasaina tanteraka.
Ho an'ny fanombohana maotera maoderina dia jereo ny lahatsary noforonin'i Rikoooo eo amin'ny faran'ny pejy.
Tena ilaina ny mamaky ny boky, PDF format.
• Fiarovan-tena, sarintany, ary sarintany
• FSX animation specific
• 1 modely ivelany sy modely anatiny
• Lisitry ny 4 tanana vita avy any ivelany
• FDE manokana
• Mifanaraka amin'ny DirectX
• Rafitra fanombohana manokana
• Fiarovana avo lenta